कांग्रेसमा कस्को पल्ला भारी ? « Nepal Bahas
कांग्रेसमा कस्को पल्ला भारी ?
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:५७
१३ कार्तिक, काठमाडौं । कार्तिक लागेदेखि राजधानीको मौसम चिसिएको छ । कोरोना कहरले थलापरेको राजधानी काठमाडौंवासीले महान चाड दशैँसमेत खुसीले मनाउन पाएनन् । लगत्तै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । नेताहरु विस्तारै सक्रिय हुन थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि एक्लिएका छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ओलीको सम्बन्ध थोरै चिसिएको छ । खासगरी कर्णाली प्रदेशको विवादमा प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको समीकरण बनेपछि ओली फेरि तनाबमा छन् । यो समीकरण अन्य प्रदेश र संघमा समेत पर्ने ठम्याई ओलीको रहेको छ । त्यसैले उनी भारतीय पक्षको सहयोगमा प्रचण्डलाई प्रभावित पार्ने रणनीति बनाएका छन् । त्यसैको एउटा श्रृखलाका रुपमा भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई विशेष दूतका रुपमा नेपाल बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गरेका छन् ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसपनि अहिले आगामी महाधिवेशन गर्न कस्सिएको छ । आउने फागुनको ७ देखि १० गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको चाैधौँ महाधिवेशनमा को सभापति उठ्ने भन्ने विषय र सन्दर्भ धेरैको चासो बनेको छ । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा अर्काे कार्यकालका लागि तयारीमा जुटेका छन् । साम दाम दण्ड भेद नीति अख्तियार गरेर भएपनि उनी फेरि सभापतिमा दोहरिन चाहेका छन् । तर उनका लागि अब सहज छैन ।
गएको साउनसम्म उनी संस्थापन पक्षबाट एक्ला उमेदवार नै थिए । तर साउनको अन्तयतिर उनकै सबैभन्दा निकट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा दाबी गरेका छन् । त्यसका लागि उनको तयारी तीब्र भएको छ । यसबारे उनले सभापति देउवालगायत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अरुसँगसमेत कुरा गरेका छन् । सर्वसम्मत रुपमै सभापति छान्ने उनको सर्त रहेको छ ।
निधिले उमेदवारी दिने तयारी थालेपछि संस्थापन पक्षकै अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठलेसमेत सभापतिमा दाबी गरे । तर श्रेष्ठको दाबीको खासै अर्थ चाहिं छैन । देउवापनि श्रेष्ठको दाबीप्रति सिरियस छैनन् । तर निधिले गरेको दाबीले देउवा झस्किएका छन् । उता, संस्थापन इतर पक्षमा पनि सभापतिका आकांक्षीको संख्या आधा दर्जन छ । वरिष्ठ नेता पौडेलका साथै महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइरालाले दाबेदारी गरिरहेका छन् । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाहना पनि सभापतिकै लागि देखिन्छ ।
सहमति नबन्दा डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीले पनि सभापतिकै लागि उमेदवारी दिने बताउँदैछन् । तर यो पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल सर्वसम्मत बन्ने कसरतमा रहेका छन् । सबैले अन्त्यमा आफैंलाई स्वीकार्ने बुझाई पौडेलको देखिन्छ । तर परिस्थिति उनले सोचे बमोजिम छैन । कोइराला दाजुभाईको तयारी उठ्नेमै छ ।अझ शेखर त देशव्यापी दौडाहामै थिए । तर बीपीको लिगेसी भने शशांकमा रहेको छ । त्यसैले आउने महाधिवेशनमा कोइराला दाजुभाईको निर्णय अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । कोइरालाद्वय मैदानमा ओर्लिको अवस्थामा पौडेल भिड्ने अवस्थामा रहने छैनन् । त्यसैले उनी भित्र भित्रै सहमति नजुटोस् भन्ने नै चाहन्छन् ।
तेस्रो धारका रुपमा रहेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिले मुख खोलिसकेका छैनन् । उनी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । साथै, शक्ति सञ्चय गर्ने उनको रणनीति देखिन्छ । सकेसम्म नयाँ गुट बनाउने उनको चाहना छ । तर उनी पक्षधर गगन थापाहरु भने यसपाला देउवालाई सघाउ पुग्ने कुनै काम भरसक नहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले सिटौलासँग पुरानो शक्ति नरहनपनि सक्छ । गगनलगायत नेताहरु शेखर र प्रकाशमानलाई एकजुट बनाउने अभियानमा रहेकाछन् । त्यसो हुँदा शेखरको नेतृत्वमा गगन महामन्त्री र प्रकाशमानलाई चुनाव जितेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति जुट्न सक्ने स्थिति छ । यसका लागि भित्रभित्रै तीब्र रुपमा तयारी भइरहेको छ । सिटौलाले यो अभियानलाई सघाएनन् भने उनको शक्ति अहिले भन्दा क्षिण भएर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
जसले जस्तो सुकै तयारी वा रणनीति बनाएपनि देउवाको भूमिका नै निर्णायक हुने देखिन्छ । देउवा सकेसम्म आफैं उठ्ने गरी बसेका छन् । तर परिस्थिति प्रतिकुल भयो भने उनी विकल्पमा पौडेल वा शशांकलाई अगाडि सार्ने पक्षमा छन् । यसबारे उनले आफू निकट केही नेताहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर विमलेन्द्रलाई भने कुनै हालतमा नछाड्ने उनको सोच रहेको छ । किनभने यसपटक निधिकै कारण आफूलाई धोका हुन सक्ने बुझाई रहेको छ ।
देउवा र पौडेल समकालिन नेता हुन् । वय उमेरका यी दुबै एकैसाथ राजनीतिमा आएका हुन् । तर देउवाले धेरै अवसर पाएभने पौडेल चुकेका छन् । त्यसको एउटा कारण पौडेल अलि संकीर्ण स्वभावका हुनु रहेको धेरैको बुझाई छ । बेला बेला देउवा आफैं पनि यस्ता कुरा निकटहरुसँग गर्ने गर्छन् । आफूले छाड्नै परे पुरानो दुखको साथी पौडेललाई समर्थन गर्ने की भन्ने सोच रहेको देखिन्छ ।
तर देउवा वरिपरिका अरु नेताहरु भने पौडेलले आफूहरुलाई कुनै सहयोग नगर्ने बुझाईमा छन् । त्यसैले छाड्नै परे शशांकलाई समर्थन गर्न उनीहरुको सुझाव छ । तर यस्तो अवस्था अहिल्यै आइसकेको छैन । देउवाको पहिलो प्रयास आफैं दोहरिने नै हो । केही नलाग्ने अवस्था आउँदा मात्रै विकल्पमा पौडेल वा शशांक हुन सक्ने देखिन्छ । देउवाको चाहना बुझेर नै निधिले बेलैमा उमेदवारी दाबी गरेका हुन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन : विभिन्न जिल्लाको प्राप्त मतपरिणाम
सर्वसम्मत नाम पेश गर्ने ओलीको तयारी, रावलको अडान कायमै
पार्टी महाधिवेशन विधि र पद्धति अनुसार हुनुपर्ने भीम रावलकाे माग
नयाँ भेरियन्ट देखापर्दा नेपालमा पनि उत्तिकै जोखिम हुने
एमालेमा चुनाव : उम्मेदवारले १५ हजारदेखि पाँच सयसम्म दर्ता शुल्क…
सहमति नभएका पदमा ९ बजेदेखि मतदान, मतदाता नामावली टाँसियो
एमालेमा चुनाव हुने बाटो खुल्यो, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
ओलीप्रतिको मेरो दृढता कसैले तोड्न सक्दैन : नेतृ वली
आइतबार धेरै कमाउने र गुमाउने कम्पनी
सोल्टी दोबाटोबाट सुन कछुवासहित ४ जना पक्राउ
‘ए’ डिभिजन लिगमा आज एक मात्रै खेल हुँदै
गणपति लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर
भोजपुरका कृषक लाहा खेतीप्रति आकर्षित
रोगको प्रकोपका कारण केरा कृषक चिन्तामा
साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार १०० मा…
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध बनौं : ढकाल
अध्यक्ष मण्डल बैठक : रावल र भुसाल सहमत नभए आन्तरिक…
तनहुँमा जितप्रकाशको पल्ला भारी, रामचन्द्र पौडेललाई गृह जिल्लामा धक्का
केपी ओलीको पक्षमा बन्दसत्र हलमा नाराबाजी